James Milner oo si weyn u amaanay Salah kahor maalmo inta uusan bilaaban horyaalka Premier League – Gool FM
James Milner oo si weyn u amaanay Salah kahor maalmo inta uusan bilaaban horyaalka Premier League
(Liverpool) 27 Luulyo 2018. James Milner ayaa si weyn u amaanay saaxiibkiis Mohamed Salah, kahor maaalmo inta uusan bilaaban maalmo horyaalka Premier League.
Laacibkaa khadka dhexe kooxda Liverpool ayaa sheegay in Mohamed Salah ay suuragal noqon karto xili ciyaareed kale inuu dhaliyo goolal badan, si Reds uu kaga caawiyo inay u dagaalanto ku guuleysiga horyaalka Premier League-ga.
“Mohamed Salah wuxuu in badan awoodaa in badan inuu soo celin karo xili ciyaareed kale ee aad u qurux badan, sida xili ciyareedkii lasoo dhaafay oo kale, laakiin waa inuu sii hormariyaa awoodiisa ciyaareed”.
“Waxaan u baahannahay inaan helno xalal kale, si aan u sii wanaajino kooxda, sidaas darteed waa inaan caawinaa dhamaanteen Mohamed Salah, si uu u bixiyo xili ciyaareed kale oo cajiib ah”.
“Waan caawin doonaa Neymar Jr”…. Thomas Tuchel
Jurgen Klopp oo ka jawaab celiyay hadaladii uu dhawaan Jose Mourinho kaga hadlay kooxda Liverpool